Ikati lilele eziko kwaboZalo
BABE noKhisimusi noNcibijane omuncu aboZalo njengoba bewugubhe ikati lilele ezike kwazise abawuholelanga uNovemba noDisemba. Isolezwe NgoMgqibelo lithole ngemithombo engaphakathi ukuthi obekudala ukuthi bangaholi wukuthi bebesamile ukuqopha.
"Njengoba wazi nawe ukuthi abalingisi bangamatoho. Awuholi ungasebenzanga. Nathi besingaholi lutho. Isibulele indlala. Lapho namatoho esiwabamba eceleni abengekho njengoba kusavalwe izwe," kusho umthombo.
Ethintwa omunye umlingisi oqavile kulo mdlalo uvumile ukuthi usenezinyanga ebhuquza ekhaya ngenxa yokuthi basamile ukuqopha. Ethintwa okhulumela lo mdlalo uNomfundo Zondi uvumile ukuthi ukuqoshwa koZalo kuke kwaphazamiseka ngenxa yezinkinga zesivumelwano zalo mdlalo nenhlangano yezokusakaza kuleli, iSABC. "Kuthathe isikhathi esingaphezu kwebesilindelekile ukufinyelela esiphethweni kwezingxoxo zesivumelwano. Okunye asivumelekile ukudingida ngezivumelwano zomsebenzi,“ kuchaza uNomfundo.
Uthe phansi amaphaphu kubalingisi ngoba ngoMsombuluko luyaqala ushikishi lokuqoshwa kwalo mdlalo. Kwenzeka lokhu nje kuke kwaba namahlebezi abethi inhlangano yezokusakaza kuleli (SABC), isabise ithimba labadidiyeli balo mdlalo ngokuthi uma bengaqhamuki neziqephu ezihlabahlosile, izophoqeleka ukuba iluqede Uzalo.
Kuthiwa iSABC yanqumela ugwayi katiki inkampani ekhiqiza lo mdlalo, iStained Glass Productions, ukuba iholele ngendlela egculisayo abalingisi futhi ibuye ibuyekeze neziqephu zoZalo ukuze kubuye ababukeli.
Elinye lamaphephandaba kuleli, iSunday World laveza ukuthi iSABC yathola ukuthi kunabalingisi abebeholelwa amakinati kulo mdlalo, nokusolwa njengembangela yokuthi lehle izinga lokulingisa. Nababukeli bese beqalile ukukhalaza ngezinga leziqephu zoZalo, ngokuthi liphansi kakhulu futhi lichaza ukuthi abadidiyeli ababahloniphi ababukeli.
Liqhuba leli phephandaba laze ladalula ukuthi iSABC beyingasaneme nangesamba sikaR179 million okuxhaswa ngawo Uzalo minyaka yonke. Nakuba kunjalo kodwa okhulumela iSABC uMmoni Seapolelo, wawachitha lawo mahlebezi okusikazwa koZalo ngejozi, wathi lo mdlalo usaqengqeleza phambili eNingizimu Afrika ngokubukwa ngoba unababukeli abangaphezu kuka-10 million zinsuku zonke.